फेसबुकमा विज्ञापन, कति छ प्रतिफल ? - साइन्स एण्ड टेक्नो - साप्ताहिक
फेसबुकमा विज्ञापन, कति छ प्रतिफल ?
फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयता र व्यक्तिगत डाटा सेयरका बारेमा धेरै गुनासा हुँदाहुँदै पनि सोसल मिडियाको दुनियाँमा फेसबुकले एकछत्र राज गरिरहेको छ । फेसबुक साथीभाइहरूसँग सम्पर्क गर्ने माध्यमका रूपमा सुरु भए पनि विश्वव्यापी रूपमा २ दशमलव २ अर्ब प्रयोगकर्ता भएका कारण यसले व्यापार–व्यवसायलाई पनि महत्व दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन ।
कम्तीमा सिद्धान्तमै भए पनि पछिल्लो दशक फेसबुक साना व्यवसायहरूलाई ग्राहकसँग जोड्ने प्रमाणित उपाय भएको छ । यसमा विशाल प्रयोगकर्ता छन् र सम्भावित ग्राहकहरूसँग जोडिने यो एउटा उत्तम उपाय पनि हो । यद्यपि धेरै प्रयोगकर्ता हुँदैमा सबै ग्राहकमा परिणत हुन्छन् भन्ने छैन । कुनै पनि ब्रान्ड अथवा साना व्यवसायको प्रवर्द्धनमा खर्च गरिने सबै प्रयास तथा पैसा अरू कुनै ठाउँमा उचित तरिकाले राख्न पनि सकिन्छ ।
फेसबुकमा विज्ञापन सही रूपमा लक्षित गर्न त सकिन्छ तर, उक्त विज्ञापनमा आँखा पर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । यदि उक्त विज्ञापनबाट आफ्नो सामान बिक्री गर्न सकिएन भने सकारात्मक प्रतिफल आउँदैन । सरल शब्दमा भन्ने हो भने फेसबुक विज्ञापन नवीनतम नौटंकी हो, जसले डिजिटल युगमा डेलिभर गर्ने भन्दा बढी कसम मात्र दिन्छ ।
प्रतिफल राम्रो छैन
विज्ञापन गरिएका फेसबुक पोस्टमा केही ध्यानाकर्षण त हुन्छ, बहस पनि चल्छ, मानिसहरूको संलग्नता राम्रै हुन्छ । साना व्यवसायका मालिकहरू धेरै मानिस आफ्नो ब्रान्डमा संलग्न भएको देख्दा उत्साहित पनि हुन सक्छन् तर, धेरैजसो प्रयोगकर्ताले उक्त पोस्टलाई ‘लाईक’ मात्र गर्छन् । लाइक गर्नु प्रतिफल पाउनु होइन । फेसबुकमा आफ्नो व्यस्त समय खर्च मात्र हुन्छ र यसले न त राजस्व उत्पादन गर्छ न त बिल नै भुक्तानी ।
अर्को एउटा सञ्चारमाध्यम मात्र
नकारात्मक कुरा गर्ने हो भने विज्ञापन गरिएको फेसबुक पेजले अधिक ‘लाईक’ र ‘कमेन्ट’ मात्र पाउँछ । फेसबुकलाई लामो समयसम्म आवश्यक ‘नेटवर्क’ का रूपमा हेरेका व्यवसायीहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने फेसबुक अर्को एउटा सञ्चारमाध्यम मात्र हो । यसमा मानिसहरू केही गर्न रुचाउँछन् भने त्यो टिप्पणी मात्र हो । उनीहरू वास्तविक ग्राहक होइनन् । ग्राहकहरूले त केही खरिद गर्छन् । यी व्यक्तिहरू केवल कमेन्टेन्टर हुन् ।
कुनै वेबसाइटमा सामान्यतः व्यवसायी एवं ग्राहकबीच सीधा सम्पर्क हुन्छ, तर फेसबुक एउटा सार्वजनिक फोरम हो । यसमा ग्राहकसँगको संलग्नता सर्वोत्तम उपाय होइन ।
फेसबुक मात्र सबैथोक होइन । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा ‘इन्स्टाग्राम’ पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ, अझै भनौँ भने जमाना ‘एन्फ्लोंसर मार्केटिङ’ को छ । खास कुरा फेसबुक प्रमोसन अनलाइन प्रमोसनको एक मात्र माध्यम हुनुपर्छ भन्ने होइन ।
विज्ञापनका अरू नेटवर्क
फेसबुकबाहेक अरू नेटवर्कको कुरा गर्ने हो भने पिन्त्रेस्ट, स्न्यापच्याट, युट्युब, इन्स्टाग्राम आदि पनि त्यत्तिकै उपयोगी छन् । यिनीहरूमा लक्षित विज्ञापनका अवसरहरूमा ध्यान पुर्‍याउनु पनि फाइदाजनक नै हुन्छ ।
प्रभावकारी ढंगले व्यापार वा सेवा पदोन्नति गर्न अनलाइन एन्फ्लोंसरको सहयोग लिनु उचित मानिन्छ । सहि व्यक्ति जसले सुसमाचार फैलाउन मद्दत गर्छ त्यो व्यक्ति सस्तो नहुन पनि सक्छ, तर त्यसले ठूलो असर पार्न सक्छ । यदि यसबाट आशा गरेभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव पर्छ भने फेसबुक विज्ञापन नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।
प्रकाशित :कार्तिक २२, २०७६
तिम्रो माया कति दिनलाई भन्दै आए वर्षा र विकास
‘दि कर्मा’ : अम्बिका दिदीलाई कति रुचाइयो ?
आज सलमानको जन्मदिन, कति बर्षका भए उनी ?
‘हामी तीन तहको जुरीबाट गीत छान्छौ’